UDonald Trump uyazithanda iincwadi kodwa akafundi kangako | Uncwadi lwangoku
Kusele usuku olunye kuphela ndisesikhundleni njengo-Mongameli waseMelika, kwaye uDonald Trump sele enike okuninzi ukuba athethe ngako. Akanikanga kuphela izihloko zencoko zemithombo yeendaba epinki kunye nezopolitiko kodwa nangokwenkcubeko, ngakumbi, ngokubhekisele kwiincwadi kunye noncwadi ngokubanzi, kuba ebethetha ngeencwadi kunye nobudlelwane bakhe nabo kudliwanondlebe olwenziweyo .
Udliwanondlebe ekubhekiswa kulo lwenziwa ngu UMike Allen y UJim Vandehei, Abasunguli beenkampani zeendaba zeAxios. Ezi zivakalisa ezinye zeefoto ezathatyathwa ngumongameli waseMelika e-ofisini yakhe, eyayigcwele inani elikhulu leekopi zeencwadi. Kungenxa yesi sizathu ukuba Udliwanondlebe wabuza uTrump malunga neengcebiso zakhe zoncwadi, Aphendule ngokulandelayo:
“Ndizithanda kakhulu iincwadi, ndiyathanda ukufunda iincwadi. Andinaxesha lokufunda okuninzi ngoku, kodwa ngokweencwadi ndiyathanda ukuzifunda ”.
Impendulo enqabileyo ngamagama kwaye ngokoluvo lwam, ngenxa yendlela azivakalisa ngayo, ngewayethethwe kakuhle ngumntwana oneminyaka eyi-8 okanye eyi-9.
1 UTrump ubhale iincwadi
1.1 "Ungaba sisityebi njani"
1.2 "Cinga ngathi ngusozigidigidi"
UTrump ubhale iincwadi
Igorha laseMelika libhale ezinye iincwadi phakathi kwezi zihloko zimbini zibalaseleyo: "Cinga ngathi ngusozigidigidi" y "Ungaba sisityebi njani".
Kwimeko apho umntu anomdla wokwazi ukuba ungantoni, nangona esona sihloko siphambili singaphezulu kwamehlo (imali), siya kushwankathela apha ngezantsi.
"Ungaba sisityebi njani"
Umongameli wangoku wase-United States wabhala kule ncwadi uthotho lweengcebiso zokuba sisityebi, into ayazi kakhulu ngayo, kuba akaphelelanga nje ekwenzeni ubutyebi kodwa, emva koqhawulo-mtshato olamshiya eqhekeza, wakwazi ukuyenza kwakhona. Kule ncwadi, uDonald Trump usinika izitshixo zokwazi ukuba kufuneka sityale njani imali, simchukumise umphathi kwaye sifumane umvuzo, siqhube ishishini ngokufanelekileyo, sithethathethane nantoni na kwaye sicinge kwaye siphile njani. Ngendlela ethe ngqo nengumnqa, uTrump utyhila zonke iimfihlelo zehlabathi leshishini.
Yahlelwa yiPlaneta ngo-2004, ngoku ayisaprintwa.
"Cinga ngathi ngusozigidigidi"
Iibhiliyonari azikhathalelanga neengxaki. Asilandeli ukuqonda okuqhelekileyo okanye senze ngokungqinelana nolindelo okanye ulindelo. Silandela umbono wethu, nokuba bathini na abanye abantu ngawo. Yiloo nto le ncwadi imalunga nayo, ifunda ukucinga ngathi ngusozigidigidi. Nokuba ugcina kuphela iipesenti ezilishumi zobulumko kula maphepha, uya kuba nethuba elihle lokuba ngusozigidi.
Ihlelwe ngu-Aguilar yoHlelo ngo-2007.
Ngethemba lokuba ekuhambeni kwexesha uzakusinika iingcebiso ezingcono zoncwadi kwaye sizokwazi okungakumbi ngobuso boncwadi bukaDonald Trump. Asiyi kuthandabuza ukuba iya kubangela intetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izaziso » UDonald Trump uyazithanda iincwadi kodwa akafundi kangako